Dhageyso: DF Somalia oo Hay’ad Maraykan ah La Saxiixaneysa Mashaariic Dhan 300 Milyan Doolar… | Badweyn.com
Dhageyso: DF Somalia oo Hay’ad Maraykan ah La Saxiixaneysa Mashaariic Dhan 300 Milyan Doolar…
Dec 3, 2017 - jawaab
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hay’adda USAID ayaa maalmaha soo socda kala saxiixan doona heshiis ku kacaya $300 oo milyan oo doolar.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Wasiir Jamaal Maxamed Xasan oo xalay kasoo qeyb galay kulan Xukuumadda RW Xasan Cali Kheyre ay kusoo bandhigeysay waxyaabahii u qabsoomay ayaa ka warbixiyay heshiiskii mashaariicda dowladda Qatar lala saxiixday iyo sida loo maareyn doono.
Waxuu Wasiirka heshiiskaas ku kacayay $200 milyan uu ku sheegay in uu ahaa midkii ugu badnaa oo dowladda Soomaaliya ay dalka gudahiisa ku saxiixdo tan iyo burburkii.
Mudane Jamaal Maxamed Xasan waxaa kale oo uu carabka ku dhuftay in maalmaha soo socda Dowladda Soomaaliya iyo Hay’adda USA Aid ay kala saxiixan doonaan heshiis fulin mashaariic ah oo ku kacaya lacag dhan $300 oo milyan.
“Maalmahan soo socda waxaan saxiixi doonnaa mid (mashaariccda Qatar) taa ka badan haddii Alle idmo oo lacag ka badan 300 oo milyan ayaan la saxiixan doonnaa hay’adda US Aid ee dalka Mareykanka. Sadexdaas boqol oo milyan iyadana waa tii ugu horreysay oo muddo sodon sano ka badan wadanka gudahiisa lagu saxiixo, taas oo nasiineysa awoodda in aan mashaariicda anaga go’aan ka gaarno sida loo fulinayo iyo meesha ay ka fulayaan” ayuu yiri Wasiir Jamaal.
Ugu dambeyntii, Wasiirka ayaa xusay in dhammaan mashaariicda dalka soo gaara ay ka fuli doonaan dhammaan dalka heer federaal, heer gobol illaa heer tuulo dalka oo dhanna la gaarsiin doono.